Ndị na-emepụta mgbidi mgbidi - Ụlọ ọrụ mkpuchi mgbidi China, ndị na-ebubata ya
Ejiji Ejiji Obodo
Ọlaedo okomoko na agba ọcha dabara adaba, juputara na ekpomeekpo ọgbara ọhụrụ.
Mpempe ígwè dị elu na-ewere ntụ ntụ na-enweghị nchara ma ọ bụ agba.
bọọdụ ndị a na-agbanwe agbanwe
Shelf nwere ike idozi 3 Tiers na-enye gị nchekwa efu.
Ụlọ mgbidi nwere mmanya towel
Nhazi mara mma nke rustic
Osisi udidi sere n'elu ụdị shelves, nkenke na kọmpat.
Ọrụ ọrụ mmụọ nke ndị omenkà, nke nwere akụkụ shelf dị ọcha yana ihe owuwu siri ike.
Onesetịpụrụ na shelf abụọ na-ese n'elu mmiri, nchikota ọzọ enwere ike maka ebe ọ bụla dịka ịchọrọ.
Maka ịchọ mma ma ọ bụ ọrụ nchekwa nke ụlọ ọ bụla.
Rustic Kitchen Wall Shelf nwere nko
tụọ anya ma kaa akara ebe oghere dị
Gwuo oghere ma pịa skru mgbasawanye etinyere n'ime oghere
Dozie shelf ndị na-ese n'elu mgbidi na skru
2-Tier Shelf nke etinyere mgbidi
Ozi ngwaahịa: Nlereanya No.: IN817 Akụkụ: 60 x 15 x 40H cm Ihe: MDF (Medium Density Fiberboard), Ngwunye ígwè agwụcha: PVC, Melamine ma ọ bụ Agba akwụkwọ: Rustic Wood Max Loading: 10kg (22 lbs) Njirimara ngwaahịa ● MAXIMIZE & hazie: Nweta mgbakwunye nchekwa ọbụlagodi na enwere oke ohere.Shelves floating 2-Tier na-enye gị ọnụ ụlọ nwere ogologo, omimi na obosara karịa.Ọ na-ekwe ka akwụkwọ inch 10 kwụ ọtọ kwụ ọtọ.● Ngosipụta ọrụ dị arọ: shelf ndị a bụ str...
Nhazi nke akwa akwa akwa akwa 2 rustic
Anyị na-eguzo mgbe niile site na ngwaahịa anyị, anyị ga-eji obi ụtọ dozie ntụpọ nrụpụta ma ọ bụ nsogbu ọ bụla ọzọ.Ọdịdị siri ike, nrụnye dị mfe na nhazi mara mma na-eme ka ndị a bụrụ nnukwu mgbakwunye na ụlọ gị.
2-Tier White Floating Shelf nwere nko
Imebe ime obodo
Ochie ojii na ọchaagbadakọtara, juputara na ekpomeekpo nke oge a.
nko na Towel Bar
Iji nko na-ahazi arịa isi nri gị, na-enweghị nko a na-ejikwa dị ka akwa akwa akwụkwọ.
Ozi ngwaahịa: Nọmba Nlereanya: MO605 Akụkụ: 42.0 x 15 x 8H cm34.5 x 15 x 8H cm28.5 x 15 x 8H cm Ihe: MDF (Ọkara Density Fiberboard), Mpempe ígwè Ngwunye: PVC, Melamine ma ọ bụ Agba akwụkwọ: Rustic Grey, Rustic Brown Max Loading: 5kg (11 lbs) NW: 2.5kg Njirimara Ngwaahịa ● Ngosipụta dị mfe & Ngosipụta Pụrụ Iche: SS Osisi dị mfe na-ese n'elu shelf nke 3D PVC n'elu mbadamba MDF siri ike na brackets ojii, zuru oke maka igosipụta na ijide mkpokọta. , obere ...